Juventus oo 2-1 Kaga Adkaatay Dormound +Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Juventus oo 2-1 Kaga Adkaatay Dormound +Sawiro
Kooxda Juventus ayaa gurigeeda guul mihiim ah kaga gaadhay dhigeeda Dortmund oo marti u ahayd, waxayna Juventus guushan ku gaadhay laba gool oo ay ukala dhaliyeen Carlos Tevez iyo Alvaro Morata, halka Dortmund uu goollka kaliya udhaliyya Marcos Rues.
Kooxda difaacanaysa horyaalka Talyaaniga ee Juventus ayaa gurigeeda ku soo dhawaynaysay kooxda ree Jarmal ee Brussia Dortmund. Juventus oo sanadihii ugu danbaysay aan horumar fiican ka samayn horyaalka Yurub ayaa xili ciyaareedkan doonaysa inay iska badasho xusuustii xumayd ee ay ka soo martay Champions Leaque-ga.
Juventus oo markii afraad oo xidhiidh ah ku sii dhawaanaysa hanshada horyaalka Serie A ayaa doonaysay inay ka faa’iidaysato xaalada aan fiicnayn ee ay ku jirto kooxda Klopp ee Dortmund. Dortmund ayaa xili ciyaaredkan ku dhibtoonaysa horyaalka Bundesligaha Jarmalka.
Juventus ayaa sidoo kale doonaysay inay kooxda Dortmund kaga aarsato guuldaradii ka soo gaadhay finalkii Champions Leaque-ga ee sanadkii 1997, markaas oo ay Dortmund ku guulaysatay 3:1.
kulankan oo ahaa mid aad u adag ayay Juventus daqiiqadii 13 aad hogaanka ciyaarta la wareegtay kadib markii uu Carlos Tevez kooxdiisa udhaliyay goolka furitaanka, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Juventus hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Hogaanka Juventus ayaa shan daqiiqo oo kalia sii jiray, waxaana kooxda martida ahayd goolka barbaraha udhaliyay Marcos Reus kaas oo ka faa’iidaystay qalad uu sameeyay difaaca Juventus ee Chiellini kaas oo inta uu ku dhacay ciyaartoy ay isku kooxyihiin dhulka ku dhacay laakiin Reus ayaan fursadan kooxdiisa ka qasaarinin, wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 1:1 ah.
Daqiiqadii 42 aad ayay marakale Juventus hogaanka ciyaarta la wareegtay kadib markii uu goolka labaad udhaliyay Morata,wuxuuna kubbad uu ka helay Pual Pogba uu kooxdiisa ugu dhaliyay goolka labaad, wuxuna ciyaarta ka dhigay 2:1 ay Juventus markale hogaabka kula wareegtay. qaybta hore ee ciyaarta ayaana lagu kala nastay 2:1 ay Juventus hogaanka ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay ciyaarty ahayd mid laysku mari waayay waxayna Juventus ku dadaalaysay inay gool danbe ka ilaashato shabaqeeda.ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:1 ay Juventus guul ku gaadhay.